Alshabaab Oo Bulshada Baardheere ugu baaqay in ay Qoryahooda Qaatan – SBC
Alshabaab Oo Bulshada Baardheere ugu baaqay in ay Qoryahooda Qaatan
Posted by Webmaster on Aktoober 24, 2011 Comments
Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qeybo ka mid agobolka Gedo Banaan baxyo logaga soo horjeedo Ciidamada DKMG ah ee gudaha u soo galay Dalka ayaa maanta waxaa qaar ka mid ah saraakiisha xarakada Alshabaab kula hadleen masaajidyo ku yaala magaalada Baardheere.
Saraakiisha ayaa shacabka u sheegayay in ay qoryaha qaataan iskana difaacaan waxa ay ugu yeereen Duulaanka Kenya ay ku soo gashay qeybo ka mid ah dhulka Soomaaliya.
Waxay sidoo kale saraakiishaasi shaaca ka qaadeen in maalmihii ugu dambeeyay ay soconayeen dhaq dhaqaaqyada u diyaar garowga difaaca ah ee dagaal lala galo ciidamada Kenya ee soo galay gobolada Gedo iyo Jubada hoose.
Hadalada Saraakiisha xarakada Alshabaab ay u jeedinayaan shacuubta gobolka ayaa waxa ay ku soo aadayaan xili maalin nimadii shalay ay ku soo dhowaadeen ciidamada Dowlada Kenya iyo kuwa DKMG ah deegaanka Buusaar ee gobolkasi Gedo .
Dhinaca kale waxaa ay sheegayaan wararka laga helayo Magaalada Baardheere ee isla gobolkaasi gedo in hawada magaaladaasi ay dul heehaabayaan diyaarado nooca dagaalka ah oo aan la ogeyn halka ay ka soo jeedaan.
Cabsi weyn ayay ka muujiyeen dadka deegaankaasi ku dhaqan iyagoona ka baqanaya in ay diyaaradahaasi ay duqeymo ka geystaan gobolka kuwaas oo khasaare soo gaarsiinkara iyaga.